Ny lalao board 15 tsara indrindra milalao an-tsehatra | Omeo fialam-boly aho
Omeo fialamboly aho
Ny tsara indrindra milalao lalao board
Isaac | 20/12/2021 15:56 | Nohavaozina amin'ny 20/12/2021 16:01 | General
ny kilalao solaitrabe mila resaka hafa ankoatr'izay lalao board sisa, satria izy ireo dia napetraka ho iray amin'ireo mampiankin-doha indrindra sy tian'ny mpampiasa sasany. Tonga namorona fanatisma lehibe izy ireo, miaraka amin'ireo mpanaraka izay mitafy ny toetran'ireo lalao ireo, izay mamolavola ny seta vita pirinty 3D na vita tanana, izay mamolavola sy mandoko ny sariny manokana, sns. Nataonay olona maro mihitsy aza izy ireo tamin'ny famakiana izay tsy dia mpomba ny boky loatra, nanatsara ny fahaiza-misaina, ny fiaraha-miasa, sns.
Ny tazo rehetra dia avy amin'ny inona no mampiavaka ireo lalao ireo, ary izany fandrotsahana mpilalao lehibe izay mamela. Ireo lalao ireo dia mitantara tantara iray, mametraka ny lalao, ary ny mpilalao dia ireo mpilalao fototra izay tsy maintsy miditra amin'ny andraikitra na andraikitra, noho izany ny anarany. Aventure ho an'ireo izay te hiaina toe-javatra mampientam-po sy aventure tsy mampino.
1 Torolàlana amin'ny fisafidianana ny lalao milalao an-tsehatra tsara indrindra
1.1 Dugeons sy dragona
1.2 Ny maso maizina
1.5 Tany voarara
1.6 Ny angano momba ny peratra 5
1.8 Ny fianjeran'i Avalon
1.9 Ny Tompon'ny peratra: dia mamakivaky ny tany afovoany
1.11 Maizina be
1.12 Nofy ratsy: Horror Adventures
1.13 Arkham horror
1.14 Ny voaly
2 Inona no atao hoe RPG?
3 Karazana lalao milalao an-tsehatra
3.1 Araka ny fomba filalaovana
3.2 Araka ny lohahevitra
4 Ahoana ny fisafidianana ny lalao milalao an-tsehatra mety
Torolàlana amin'ny fisafidianana ny lalao milalao an-tsehatra tsara indrindra
Anisan'ireny lalao board lalao mahafinaritra indrindra izay azonao vidiana, ary ireo no mpivarotra tsara indrindra amin'ity sokajy ity, ahitana:
Dugeons sy dragona
Kitapo ilaina amin'ny fonja ...
Iray amin'ireo kilalao an-dàlam-pilalaovana an-tsehatra par excellence izy io. Iray amin'ireo miely patrana indrindra eran-tany. Izy io dia lalao fiaraha-miasa fantasy izay mandentika anao ao anatin'ny tontolo mahagaga. Mety amin'ny 10 taona izy io, ary azo lalaovina amin'ny mpilalao 2 ka hatramin'ny 4. Ao anatin'izany dia tsy maintsy misafidy ny toetranao ianao ary miady amin'ny biby goavam-be, ary miaina aventure vaovao tanteraka isaky ny misy, satria ny fanapahan-kevitra sy ny vintana dia midika fa tsy mitovy foana izany. Ho fanampin'izay, ny zavatra tsara dia ny hahita boky maromaro misy tantara sy lohahevitra samihafa azo isafidianana na angonina.
Mividiana Dungeons & Dragons Manomboka ny aventure Vidio ny Kit Starter Essential
Ny maso maizina
NY MAZO MAIZINA
Izy io dia iray amin'ireo kilasika, ary efa am-polony taona maro izay no nanombohana ity lalao alemana ity. Ny andiany faha-5 dia nadika tamin'ny teny espaniola, mba hankafizin'ny mpankafy eto ihany koa ny zava-niainana mahafinaritra ao Aventuria, kaontinanta feno angano, toetra mistery, biby goavam-be ary zavaboary hafahafa, izay hilalaovan'ireo mpilalao ho mahery fo.
Vidio ny maso maizina
Devir Mpisavalalana. Fitsipika...
Ity anaram-boninahitra hafa ity dia iray amin'ireo lalao milalao an-tsehatra malaza indrindra. Ao anatin'izany, ny mpilalao tsirairay dia hanana ny anjara asan'ny mpitsangatsangana tsy maintsy ho tafavoaka velona amin'ny tontolo mahafinaritra feno ody sy faharatsiana. Ny boky dia ahitana ny fitsipiky ny lalao, ny talen'ny lalao, ary ny fitsipiky ny famoronana endri-tsoratra mahafinaritra, safidy tsipelina, sns. Lalao mety hatomboka noho ny fahatsorany.
Vidio ny Pathfinder
Lalao Warhammer Roleplaying ...
Warhammer dia mila fampidiran-dresaka vitsivitsy, fanta-daza amin'ny tontolon'ny lalao video ary koa eo amin'ny lalao board milalao anjara. Lalao fantasy mampahatsiahy amin'ny fomba sasany amin'ny WoW na Warcraft, satria mitondra anao any amin'ny tontolo gothic tranainy izay anjakan'ny zavaboary mampatahotra, mahery fo, mistery ary loza.
Vidio ny Warhammer
Tany voarara Quetzel's ...
Izy io dia noforonin'ny Free League Publishing, manolotra traikefa lehibe amin'ny fomba sekoly tranainy indrindra. Ankehitriny dia tonga amin'ny andiany vaovao miaraka amin'ny mekanika vaovao hivelomana amin'ny tany voarara izy io. Amin'ity tranga ity, ny mpilalao dia tsy milalao mahery fo, fa rogues sy mpanafika izay hanao izay rehetra ilaina mba ho tafavoaka velona amin'ny tontolo voaozona izay tsy afaka manavaka ny marina sy ny angano ny mponina ao aminy.
Vidio ny tany voarara
Ny angano momba ny peratra 5
Lalao Fantasy Flight - Ny ...
Need Games dia namorona ity lalao board RPG ity miaraka amin'ny sehatra mifototra amin'ny fantasy tatsinanana. Ao Rokugan no misy azy io, toerana an-tsaina any Japon feodal. Ankoatr'izay dia misy ny fitaomana sinoa sasany, ary izany dia mametraka anao amin'ny kiraron'ny samurai, bashi, shugenja, moanina, sns.
Buy The legend of the 5 rings
Nadika tamin'ny teny espaniola koa ny Gloomhaven andiany faharoa. Ity lalao ity dia tsy iray amin'ireo soso-kevitra indrindra hanombohana amin'ny tontolon'ny mpilalao, fa mikendry kokoa ny matihanina. Ny mpilalao tsirairay dia mandray ny andraikitry ny mpikarama an'ady tafiditra ao anatin'ny tontolo fantasy mivoatra. Hiara-hiasa sy hiady amin’ny fampielezan-kevitra isan-karazany izy ireo izay miova arakaraka ny hetsika atao.
Vidio ny Gloomhaven 2
Ny fianjeran'i Avalon
Tainted Grail: The Fall...
Anaram-boninahitra iray hafa ho an'ny matihanina. Ity anaram-boninahitra milalao an-tsehatra ity dia manambatra ny angano Arthurian, ny angano Celtic, ary tantara lalina sy sampana izay ahafahan'ny fanamby atao amin'ny fomba samihafa isaky ny lalao. Tsy maintsy handray fanapahan-kevitra henjana ianao, ary ny sasany toa tsy manan-danja, nefa afaka manova zavatra be dia be amin'ny fotoana maharitra. Vonona ve ianao?
Vidio ny fahalavoan'i Avalon
Ny Tompon'ny peratra: dia mamakivaky ny tany afovoany
Lalao Fantasy Flight -...
Ny lohatenin'ny JRR Tolkien dia tsy vitan'ny hoe lasa sarimihetsika sy lalao video, fa tonga ho toy ny lalao an-tsarimihetsika miaraka amin'ity fonosana ity ihany koa. Ao anatin'izany ianao dia miroboka amin'ny dia amin'ny Middle-Earth, miaraka amin'ny aventure sy ireo toetra angano indrindra amin'ity tantara ity. Ny dinamikan'ny lalao dia mizara ho fampielezan-kevitra, ary ny fiafaran'izany, ka mahagaga anao izany na dia milalao imbetsaka aza ianao ...
Vidio ny Tompon'ny peratra
Scythe amin'ny teny espaniola
Taorian'ny lavenon'ny Ady Lehibe I, nanidy ny varavarany ny fanjakana kapitalista antsoina hoe La Fábrica, ka nanintona ny sain'ny firenena manodidina sasany. Zava-misy mifanitsy napetraka tamin'ny 1920 ary ny mpilalao tsirairay dia hilalao solontenan'ny ankolafy dimy any Eoropa Atsinanana, miezaka ny hahazo harena ary mitaky tany manodidina ny orinasa mistery.
Massive Darkness dia manolotra traikefa mahafinaritra amin'ny fomba mahazatra tena izy. Lalao board maoderina sy feno hetsika miaraka amin'ny bitika mahavariana sy lalao tena tsotra. Izy io dia mifantoka amin'ny fihetsiky ny mahery fo, tsy mila mpilalao ho mpitari-dalana hifehy ny fahavalo.
Vidio Massive Darkness
Nofy ratsy: Horror Adventures
Diset- Nightmare - Lalao ...
Paikady, lojika, fahaiza-mamorona, fiaraha-miasa ... samy mifangaro amin'ny fitsangatsanganana mampihoron-koditra izay miroboka ao anatin'ny tontolo feno tsy ampoizina sy mistery. Ny mpilalao tsirairay dia handray ny andraikitry ny zanak'i Crafton, ary tsy maintsy mahita hoe iza no namono ny rainy tamin'ny alalan'ny famotopotorana ireo famantarana momba ny tranon'ny fianakaviana taloha.
Fantasy Flight - Arkham ...
Lalao mampihoron-koditra sy milalao an-tsehatra mitondra anao any amin'ny tanànan'i Arkham, izay atahoran'ny zavaboary any ankoatra. Ny mpilalao dia tsy maintsy manambatra hery, mandray ny andraikitry ny mpanao fanadihadiana, mba hamonjena ny toe-javatra mampidi-doza an'izao tontolo izao. Ny tanjona dia ny hanangona ireo famantarana sy loharano ilaina mba hiadiana amin'ny Ntaolo sy hanakanana ny teti-dratsiny.
Vidio ny Arkham Horror
The Veil - Lalao ...
Ity lalao milalao an-tsehatra ity dia manana lohahevitry ny cyberpunk, amin'ny toerana izay nanosika ny olombelona ho amin'ny fetrany ny teknolojia, ary sarotra ny manavaka ny tena izy sy ny foronina. Noho izany, tsy maintsy mitarika ny fanoherana ianao (na dia mekanika aza ny ampahany amin'ny vatanao ...) mba hiezaka ny hametraka fetra amin'ny teknolojia izay nahatonga fahavoazana be. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny asa malaza toa ny Blade Runner, Altered Carbon, ary The Expanse.
Buy The Veil
Inona no atao hoe RPG?
Sary maimaim-poana (Lalaon'ny ankizy) avy amin'ny https://torange.biz/childrens-board-game-48360
Ho an'izay mbola tsy mahalala inona no atao hoe lalao solaitrabeIzy io dia lalao mitovy amin'ny lafiny sasany amin'ny lalao hafa, fa ny mpilalao dia tsy maintsy milalao anjara na anjara. Mba hanaovana izany, dia manana rafitra fototra:
Talen'ny lalao: Rehefa manomboka ny fizotry ny lalao an-tsehatra, dia ny iray amin'ireo mpilalao no manara-maso azy foana izay ho tale na tompon'ny lalao. Izy no mpitari-dalana sy mpitantara ny lalao, izay mamaritra ny sehatra, ampahany fototra izay hitantara ny tantara ary ho mpanelanelana eo amin'ireo mpilalao mandray anjara. Ankoatra izany, azonao atao ihany koa ny milalao ireo tarehin-tsoratra izay tsy mampiavaka ny mpilalao hafa, toy ny mpilalao faharoa. Ny andraikitry ny talen-tsekoly iray dia ny tompon'andraikitra amin'ny fitsipika arahina. Mba hanaovana izany, dia ho ilay manana ny lalao boky amin'ny fotoana rehetra.
mpilalao: izy ireo sisa izay mandray anjara na andraikitra hafa tsy mitovy amin'ny talen'ny lalao, izay amin'ny ankapobeny dia milalao ny maherifon'ny tantara. Ny mpilalao tsirairay dia hanana ny takelaka misy azy, miaraka amin'ireo toetra, fahaiza-manao ary angona hafa mifandraika amin'ny toetra nofidiny. Azonao atao ihany koa ny mampiditra tsipiriany hafa toy ny akanjo anaovanao, fitaovam-piadiana, fahaiza-manao, tantaranao, singam-pahefana, sns.
Maps: izy ireo dia miasa amin'ny fametrahana ireo mpilalao mandritra ny lalao. Izy ireo dia mety ho cartographie, boards, na seho 3D, seho tena izy, props ary haingon-trano, sns.
Miaraka amin'ireo fitaovana rehetra ireo, ny mpilalao dia hanapa-kevitra, miaraka amin'ny dice vintana fanohanana, inona no hetsika ataonao amin'ny toetranao, ary ny talen'ny lalao dia hanapa-kevitra raha azo atao na tsia ireo hetsika ireo, ny fahasarotana, ary voahaja ny fitsipika. Fanampin'izay, hanapa-kevitra ihany koa ny tompony hoe inona no ataon'ireo NPC na mpilalao tsy mpilalao.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny lalao board lalao miara-miasa izy ireo, tsy mifaninana toy ny lalao hafa. Noho izany, tsy maintsy miara-miasa ny mpilalao.
Karazana lalao milalao an-tsehatra
Anisan'ireo karazana sy variana Ny lalao an-dàlambe an-dàlambe dia ireto sokajy manaraka ireto:
Araka ny fomba filalaovana
Araka ny fomba filalaovana amin'ny lalao milalao an-tsehatra, azonao atao ny manavaka ny:
table: izay no voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity.
velona: izay azo atao amin'ny toerana voajanahary, trano, sns., miaraka amin'ny akanjo na makiazy ho an'ny toetra.
Amin'ny mail- Izy ireo dia azo nilalao nifandimby mampiasa mailaka, na dia tsy izany no fomba tsara indrindra na haingana indrindra. Ankehitriny dia nanafaingana an'io dingana io ny mailaka sy ny fampiharana hafatra an-tsoratra.
Lalao video RPG: ny dikan-teny nomerika amin'ny lalao milalao an-tampon'ny takelaka.
Araka ny hevitry ny lohahevitra na fomba avy amin'ny lalao milalao an-tsehatra, azonao atao ny mahita:
manan-tantara: mifototra amin'ny zava-niseho tena nisy teo amin'ny tantaran'ny olombelona, ​​toy ny ady, fanafihana, Moyen Âge, sns.
Fantasy: mazàna izy ireo dia mampifangaro ampahany amin'ny tantara, amin'ny ankapobeny, avy amin'ny Moyen Âge, miaraka amin'ny singa fantasy, toy ny fampidirana ombiasy, trolls, orcs, ary zavaboary angano hafa. Ohatra, RPG fantasy epic-moyen Âge.
Fampihorohoroana sy horohoro: lohahevitra iray hafa ho an'ireo tia an'ity karazana votoaty ity, miaraka amin'ny mistery, fiokoana ary tahotra. Ny asan'ny HP Lovecraft dia nanentana ny maro amin'izy ireo. Ho fanampin'izay dia hahita matoatoa, monsters, zombies, vampira, werewolves, zavaboary avy amin'ny laboratoara siantifika na fikarohana miaramila, sns.
Uchrony: zava-misy hafa, izay mametraka ny tena zava-mitranga amin'ny fomba fijery hafa. Ohatra hoe hanao ahoana izao tontolo izao raha nandresy ny Ady Lehibe II i Alemaina, sns.
Fiction ho avy na fiction siantifika: mifototra amin'ny hoavin'ny zanak'olombelona, ​​na eny amin'ny habakabaka. Misy karazany maro eto, toy ny lalao mifototra amin'ny tontolo aorian'ny apokaliptika, momba ny fanjanahan-tany amin'ny planeta, cyberpunk, sns.
Space Opera na fantasy epic-space: subgenre mifandray amin'ny teo aloha, fa ny siansa foronina dia singa iray hafa amin'ny toerana. Ohatra iray ny tontolon'ny Star Wars, izay misy tantara foronina momba ny siansa, saingy mitranga amin'ny lasa saika angano izany.
Ahoana ny fisafidianana ny lalao milalao an-tsehatra mety
Mifidiana lalao tsara Tsotra ny latabatra filalaovana an-tsehatra, satria mila mifantoka fotsiny amin'ireo hevi-dehibe maromaro ianao, toy ny:
taona: tena zava-dehibe, toy ny amin'ny lalao board hafa, ny hamantarana ny taona nanaovana azy. Tsy ny rehetra no manana votoaty mety amin'ny sokajin-taona rehetra, satria mety ahitana sary ho an'ny olon-dehibe, teny ratsy, ary sarotra loatra ho an'ny zaza tsy ampy taona. Zava-dehibe ny hamantarana hoe firy taona no hilalaovan'izy ireo, ary mandehana amin'ny sahaza azy.
Isan'ny mpilalao- Lafin-javatra iray hafa tokony hodinihina ny isan'ny mpilalao tohanany. Raha hiara-hilalao amin'ny namana na fianakaviana maro ianao, dia zava-dehibe ny fahazoana mpilalao na ekipa ampy, mba tsy hisy ho tafavoaka.
foto-kevitra: resaka tsiro io, ary tsy maintsy misafidy izay mifanaraka amin'ny safidinao ianao. Misy ny tantara foronina siantifika, karazana dragona ary tranomaizina, misy lohahevitra cyberpunk, apokaliptika, sns.
Fametrahana mety: Ny ankamaroan'ny lalao milalao an-tsehatra dia mampiasa tabilao na tsy mila zavatra manokana. Na izany aza, ny sasany dia mety mitaky toerana bebe kokoa hiparitaka, na fitaovana fanampiny. Zava-dehibe ny fiheveranao ny zavatra azonao atao ary raha azonao atao tsara ny milalao ny lalao milalao amin'ny toerana misy anao sy amin'ny loharano anananao, raha azo atao amin'ny toerana malalaka, sns.
Fahaiza-manao fanamboarana: Ny lalao milalao an-tsehatra sasany dia manohana ny fanamboarana avo lenta, afaka manampy ny toetranao na ny sarinao manokana, mamorona haingon-trano hampiasaina ho birao lalao, sns. Ireo mpanamboatra sy tia ny DIY sy ny asa tanana, azo antoka fa aleony ity karazana kilalao an-tsehatra ity, izay hanampy azy ireo hampivelatra ny fahaiza-mamorona sy ny eritreriny hamorona ny dikan-dry zareo manokana. Ohatra, ny sasany dia mampiditra boky misy toromarika sy tantara fotsiny, ary azonao atao ny mamorona ny toerana. Ny hafa dia mety ahitana ireo antsoina hoe modules na scenario izay manamora ny asanao.
Lalao matihanina milalao an-tsehatra: somary sarotra ny sasany ary natao kokoa ho an'ny matihanina amin'ity karazana karazana ity. Na dia afaka mianatra sy lasa pro aza ny amateurs, dia mety tsy izy ireo no tsara indrindra hanombohana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Ny tsara indrindra milalao lalao board
Ny lalao board tsara indrindra hatramin'izay
Ny lalao board Escape Room tsara indrindra